कोभिड—१९ ले विगत चार महिनादेखि विश्वभरी आतंक मच्चाइरहेकोे छ। प्रत्येक दिन हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यसलाई निको पार्ने भ्याक्सिन बनाउन अहिलेसम्म कसैलाई पनि सफलता मिलिरहेको छैन। यसले विश्वम...
ओली अधिनायकवाद र कानुनी शासनको उपहास !
प्रसिद्ध विधि शास्त्री एभि डायसीका अनुसार कानुनी शासन भनेको कानुनको सर्वोच्चता हो, कुनै व्यक्तिको शासन होइन । अहिले दुई तिहाइको बहुमत सहित नेकपा सरकारमा छ । यसको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन् । मुलुकको...
लकडाउनको अर्थ सरकारले नै बुझेन, नागरिकले कसरी बुझोस्
नेपालमा लकडाउनको सबै भन्दा ठुलो मार यति बेला निम्न वर्गीय जनताहरूले खेपिरहेका छन्। सरकारको राहत वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरू भोकै पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। जसको...
मुलुकलाई नै लकडाउन गरिएपछि अर्थतन्त्र स्वतः सुस्ताउने नै भयो। अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा यो लकडाउनको असर भिन्नभिन्न रूपमा परेको देखिन्छ। बजारसँग धेरै नजोडिएका ग्रामीण र कृषि क्षेत्र सामान्य रूपमा ...
अमेरिका चीनको व्यापार र कोरोना युद्धले फाइदा कसलाई ?
सन् १९८० मा चीनले विश्वको जम्मा ३% मात्र उत्पादन क्षमता राख्दा नवौँ स्थानमा रहेकोमा हाल संसारको ५०% भन्दा बढी सामानहरू उत्पादन गरेर उत्पादनको केन्द्रबिन्दु बन्दै संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा...
सुनामी बन्दै काेराेना !
विश्वमा अनेकौँ शक्ति संर्घष पश्चात् शक्तिशाली भनेर कहलिएका राष्ट्रहरू अहिले विचित्रको लडाइ लड्न बाध्य भएका छन् । गत डिसेम्बर अन्त्यबाट चीनको वुहान प्रान्तमा देखा परेको कोभिड-१९ ले हाल विश्वमा महामारीक...